Forum serasera malagasy effet de serre - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : effet de serre
sakaizakely - 31/03/2006 14:45
Miha-mafana ny tany, ary fotoana vitsy sisa dia hiempo tanteraka ny glaces any @ pôles nord
1° hisotrondra ny niveau-n'ny rano, ho betsaka ny toerana ho difotra tanteraka => fifindramonina (exode) ho an'ireo traboina izay hantsoina hoe réfugiés écologiques.
2°ny glace any Antarctique dia mitana ao ambaniny (sous-sol) réserve de gaz (méthane) en milliards de tonnes. Raha mitranga tokoa ny fonte glaciaire nohon'ny fitombon'ny hafanana, dia libéré dans l'atmosphère ireo méthane ireo, ary hitombo be ny température @izany fotoana izany, ary diso tara loatra. Tsy misy fanafodiny intsony fa dia hafanambe manevokevona no hianan'ny olombelona raha tsy ho fongana aza izy. Tsy ho ela dia hitranga io catastrophe naturel io hoy Nicolas Vanier, explorateur.
Tsy hita ho tanisaina ny fahasimbana sy ny faharavan'izao tontolo izao noho ny pollution sy ny fanimbana nataon'ny olombelona. Mihangazana ny tany, tsy ho araka intsony ny hamelona antsika 6 milliards.
Inona no lova apetrantsika ho an'ireo zanatsika izay hihalehibe sy hiaina eto amin'ny planeta izay nosimbantsika sy nolotointsika ? Havelantsika ho azy ireo ve ny fanarenana ny tsy nety vitantsika hatramin'izay ? Tsy ezaka diso be loatra ho an'ireto soroka kely ireto ve izany ? Mijery ny zanako mbola kely aho dia manontany tena izay mba ho fiainay any aoriana. Mampanantena anareo hiezaka tsy handanilany foana ny haren'ny tany (ressources naturelles), hitsitsy rano, tsy hampiasa sacs plastiques, hampiasa produits bios...
Inona no mba résolutions-nareo eto @ serasera mikasika ny planeta ity e ?
andry44 - 31/03/2006 16:48
ka raha vao mbola mitombo ny isan'ny mponina eto tsy misy fika io e!raha ny mari-pana myenne @izao izao de 15°C intsony fa eo anelanelan'ny 17 sy 20°C eo.Ary mbola hiakatra io ka mety ho tonga 22°C any;ka eo vao ho ringana tsikelikely ny zava-mananaina,ao anatin'izany isika olombelona ka asa na ho hisy mafy aina hahazaka izany na ahona?
Afaka 1000 ans any araka ny vianavina'ny manampahaizana de hisy période glacière toy ny tany aloha tany eto@tany.
kally - 31/03/2006 19:38
Ny gilasy mitsonika eo ihany fa ny tantely ripakin'ny pesticide no tena loza!! raha vao ny tantely no lany tamingana dia tsy ho ela dia ho avy koa ny an-draolombelona.
rasah - 02/04/2006 13:28
tena marina ireo ary tokony hatomboka @ izao fotoana izao ny ady @ fandotoana ny tontolo iainana ka mitarika ny fiakaran'ny mari-pana sy ny fivadibadian'ny toetr'andro.
tokony hanana paik'ady ny firenena tsy 1-1 hanenana ny setroka avoakan'ny fiara, tokony hiroso bebe kokoa @ énergies renouvelables koa hialana @ fampiasana ny ala ho fandrehitra, mba tsy atao fisehosehona fotsiny koa ireny fambolen-kazoo ireny fa tena arahina aso tsara
ratahx - 17/05/2006 13:21
Tsarovy fa isika olombelona ihany no mamorona zavatra hamonoantsika ny tenantsika eh! Ny setroka avoakan'ny fiara sy ny orinasa be dia be eto an-tanana ireo.
Amin'izao fotoana izao anie malaza be ny resaka fiaraovana ny tontolo iainana io eh! Hampitombona ny velaran'ny ala arovana, tsy azo atao ny manapaka sy mandoro ala, nefa inona ny mesure d'accompagnement raisin'ny tompon'andraikitra voalohany amin'ireny.
Raha hampiasa fandrehitra hafa ary ny olona fa tsy ny arina izay vokariny, ohatrinona ny vidin'ny gaz, sy ireny mandeha amin'ny herin'aratra ireny.
Izy ity anie raha ny théorie be dia be fa ny fanovana ny toe-tsaina sy ny fanampiana ny vahoaka any ambanivohitra any no tena tokony hatao mafotaka eh!
Ny hazo ambolena aoka koa raha hamboly mba tsy ireny hazo mitroka rano be ireny. Marina fa mora ny vidiny fa mba jerena koa hoe inona ny vokany rehefa avy eo.
Zay fa lava loatra!!!!